TowardsaFederal Land Law - Land Core Group Myanmar
TowardsaFederal Land Law
အမျိုးသားမြေဥပဒေရေးဆွဲရေး လမ်းပြမြေပုံ‌ရေးဆွဲခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို မနက်ဖြန် ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဖက်ဒရယ်မြေဥပဒေဖြစ်ပေါ်လာစေရေး တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အသံတွေ သိရှိသွားအောင် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ခါကောင်း ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အနာဂတ်ကာလမှာ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုဂရက်တစ် ပြည်ထောင်စုတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်တည်လာသောအခါ ရှိလာမည့် အနာဂတ် ဖက်ဒရယ် မြေဥပဒေတစ်ခုကို ယခုကတည်းက ကြိုတင် မျှော်မှန်းကြည့်ထားခြင်းဟာလည်း လုပ်သင့်တဲ့အရာလို့ ဆိုချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို အောက်ပါလင့်မှာ ရယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Tomorrow,aworkshop aimed at developingaroad map for formulation of the National Land Law will be held. We feel that it is extremely important for voices that have been advocating foraFederal Land Law to be heard at this time.
We argue also for the value of envisioningafuture Federal Land Law that will become possible when Myanmar is in factafederal democratic union. Such as vision could serve as an important guide for thinking aboutaNational Land Law in the present. Please find our essay at beside download link.